Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Masar oo Si Dadban Uweeraray Taliska Wayaanaha.
Madaxwaynaha Masar oo Si Dadban Uweeraray Taliska Wayaanaha.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Qahira ee xarunta wadanka Masar ayaa sheegaya in Madaxwaynaha wadanka Masar Cabdifataax Al-siisi uu siwayn uga hadlay biyo xidheenka ay xukuumada wayaanuhu kadhisayso wabiga Nile.
Madaxwayne Al-sisi oo shir jaraa’id kuqabtay magaalada Qahira ayaa kahadlay biyo xidheenka ay xukuumada wayaanuhu sida sharci darada ah u dhisayso isla markaana ay ku abuurayso colaada wayn ee Gobolka.
Cabdifataax Al-sis ayaa shirkiisa jaraa’id kusheegay in xukuumadiisu aysan kasoo horjeedin hormarka wadanka Itoobiya isagoo intaas kudaray in uu baadi goob ugu jiro nabada guud ahaan mandaqada iyo xidhiidhka dowladaha Gobolka.
Madaxwayne Al-siisi oo hadalkiisa siiwatay ayaa sheegay in wabiga Nile uusan biyo u ahayn dadka ree Masar balse uu uyahay qayb wayn oo noloshooda ah isagoo sheegay dadka masaaridu aysan noolaan karin la’aanta biyaha wabiga Nile.
Sidoo kale madaxwayne Al-siisi ayaa sheegay in ay dowladiisu leedahay awood ay kudifaacdo xaqa shacabka Masaarida iyo amaankooda, wuxuuna madaxwaynuhu sheegay in biyaha wabiga Nile ay qayb wayn kayihiin amaanka Gobolka.
Hadalka madaxwaynaha wadanka Masar ayaa umuuqday mid fariin culus udiraya xukuumada fashilantay ee wayaanaha wuxuuna madaxwaynuhu si dadban uweeraray dhaqanka xukuumada wayaanaha.
Macada talaabada ay dowlada Masar kaqaadi doonto taliska wayaanaha haduu kawaan toomi waayo qorshihiisa ku aadan biyaha wabiga Nile oo sanadihii lasoo dhaafay xiisad xuni kataagnayd.